दशा मेरो लागी – Nepal Reports
दशा मेरो लागी
परिवर्तन सम्भव छ । हिंसारहित समुदाय बनाउने अब जिम्मा तपाईंको ।
लोक मान्यता अनुसार परापूर्वक कालमा शुम्भ, निशुम्भ, महिषासुर, रक्तबिज, दुर्ग जस्ता दैत्यहरूले देवता तथा मानवलाई धेरै सताए । ति दानवहरूको अन्याय सहन गर्न नसकेर हैरान भएका देवीदेवताहरूले ति दैत्य/ राक्षसलाई निर्मूल (बध) गर्न दुर्गा भवानीको पूजा गरे । यसरी देवताहरू बाटै दैत्यको वध गर्न आग्रह गरेपश्चात् दुर्गाले दैत्यको संहार गरिन् । यसपछि अन्याय, अत्याचार को अन्त्य भई असत्य माथि सत्यको विजय भएको महाउत्सवका रूपमा दशैं मनाइने मान्यता रहेको पाइन्छ।
देवीले त दैत्यको वध गरिन्, राक्षसको बली लिइन्। तर थाहा छैन यहाँ दशैंको नाम पुकार्दै यि सर्वक्षेष्ठ प्राणि जनावरहरूको वध किन गरिरहेका छन् । मानव मुकुटधारी राक्षस त ति हुन् जो पशु हिंसा गर्छन्। यहाँ हत्या र हिंसा यसरी बढिरहेको छ मानौंकी ति पशुहरूले मानव जातिलाई ठुलो हानि पुर्‍याएँ । बलि प्रथाले यसरी मोड पायो कि मानव आफैंले आफैँलाई देवता सम्झिरहेको छ ।
पशु हिंसा गर्ने अनि समाजसेवाको नाममा मानवताको मन्त्र जप्दै हिँड्ने ।
डर लाग्छ जब मानवले मानवकै हत्या गरेको सुन्दा, दशैंका लागि त त्यो केवल एक अशिक्षित पशु ।
दिल त रहेछ यि मान्छेहरूको! के पशु हिसां बिना दशैं मनाइदैंन ? के मानव जाति मासु बिना बाँच्न सक्दैन ?
चोट लागे कसलाई दुख्दैन, असह्य भएर छटपटिएको त्यो जीवन आफ्नो स्वार्थको लागि । कँहाको न्याय हो यो । धर्ममा आस्था होस् या नहोस् तर मानवताको हिसाबले हेर्दा पशु हिसां एक जघन्य अपराध हो। दशैं एउटाको र दशा अर्कोको नहोस् ।
तस्बिर: भुवन अधिकारी